रेमिट्यान्स निर्भर अर्थतन्त्र | Business and Economy of Nepal
रेमिट्यान्स निर्भर अर्थतन्त्र
Posted on September 7, 2012 by Babukrishna
गत आर्थिक वर्षमा नेपालको शोधनान्तर बचत ऐतहासिक रूपमा एक सय २७ अर्ब ७० करोड रुपियाँ पुग्यो । अघिल्लो वर्ष करिब ३० अर्ब रुपियाँसम्म घाटामा रहेको थियो । यो रकम एकाएक सकारात्मकतातिर लम्कनुको मुख्य कारण विदेशमा काम गर्न जानेको संख्या वृद्धिसँगै उनीहरूले पठाएको रकमको वृद्धि नै हो ।
गत वर्ष नेपालले प्राप्त गरेको रेमिट्यान्सको रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४१ प्रतिशतले वृद्धि भएर तीन सय ५९ अर्ब ५५ करोड रुपियाँ पुगेको छ । यो रकम गत आर्थिक वर्षको नेपालको बजेटको रकमसँग नजिक हुन पुगेको छ । यो तथ्यांकलाई हेर्दा रेमिट्यान्सले नै नेपालको अर्थतन्त्र धानेको छ भन्दा पनि अत्युक्ति नहोला ।
आव २०६४/६५ मा एक खर्ब ४२ अर्ब ६८ करोड विप्रेषण भित्रिएको थियो भने आव २०६५/६६ मा दुई खर्ब नौ अर्ब ७३ करोड र २०६७/६८ मा दुई खर्ब ५३ अर्ब ५५ करोड रुपियाँ विप्रेषण नेपाल भित्रिएको थियो । नेपाल भित्रिने विप्रेषण कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा नेपाल विश्वमा विप्रेषण आय प्राप्त गर्ने प्रमुख पाँच मुलुकभित्र पर्ने विश्व बैंकले प्रतिवेदनमा नै उल्लेख गरिसकेको छ । यसरी देशकै अर्थतन्त्रको हाराहारीमा रेमिट्यान्स बढी भित्र्याउने अन्य देशहरूमा ताजकिस्तान, टोङगा, लेसोथो र माल्डोभा रहेका छन् ।
कामका लागि विदेशिनेहरूको संख्या निकै बढ्दै गएको छ । २०५० सालमा सुरु भएको विदेशिने क्रम २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि ह्वात्तै बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । खाडी क्षेत्रमा काम गर्न जाने महिला नै ४० हजारभन्दा बढी छन् । जबकि दोस्रो जनआन्दोलनअघिसम्म महिलालाई वैदेशिक रोजगारीको स्वीकृति थिएन । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्यामा वृद्धिसँगै रेमिट्यान्स पनि बढेको छ । तर, अर्थशास्त्रीहरूको भनाइमा रेमिट्यान्स जति नै बढे पनि त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउँदैन । अर्थशास्त्री डा. चिरञ्जीवी नेपाल भन्छन्– ‘अहिले कामदारले पठाएको पैसा घरखर्चमै ठीक्क छ । पुँजी निर्माणमा तिनीहरूले पठाएको पैसाको सदुपयोग हुन सकेको छैन ।
विभिन्न उद्देश्यले विदेशिएका करिब ३० लाख नेपालीमध्ये पाँच प्रतिशतले उद्यमीको हैसियतसमेत बनाएका छन् । संक्रमणकाल सकिनेबित्तिकै उनीहरू यहाँ लगानी गर्न आउने विश्वास अर्थशास्त्रीहरूको छ । त्यस्तो सीप र लगानीबाट रोजगारी सिर्जना गर्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ ।
तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणले कृषिमा आश्रित जनसंख्या ८० प्रतिशतबाट ७६ प्रतिशतमा झरेको देखाएको छ । सर्वेक्षणले देशभित्र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना नभएपछि युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षित भएपछि खेतीयोग्य जमिनसमेत बाँझो भएको देखाएको छ ।
रेमिट्यान्स बढ्नुको कारण नेपाली कामदारले विदेशमा पाउने तलब बढेर नभई कामदार संख्या र डलरको भाउ बढेर आएको यथार्थलाई भुल्नु हुँदैन । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबारे अनुसन्धान गरेका अर्थविद् डा. नेपाल बंगलादेश वा भारतबाट समान कामका लागि जानेको तुलनामा दक्ष सीपको अभावमा नेपालीले कम तलब पाएको बताउँछन् । आव २०६२/६३ सम्ममा सात लाख ५८ हजार ६ सय ७५ जना विदेशमा काम गर्न गएकामा त्यसयताका ५ वर्षमा झन्डै दोब्बरले मुलुक छाडेका छन् । विभागबाट अहिले दैनिक औसत १८ सयजनाले श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन् । एक वर्षअघिसम्म यो संख्या आठ सयको हाराहारी थियो । यति ठूलो जनसंख्याले दैनिक मुलुक छोड्दा भएको घाटा रेमिट्यान्सबाट पूर्ति हुन नसक्ने विज्ञको ठहर छ ।
विदेशमा श्रम गर्न बाध्य युवाहरूको वर्तमान सुखद देखिए पनि जीवनको भविष्य अन्योल र अनिश्चयपूर्ण देखिन्छ । विदेशमा गएर श्रम गरी पैसा पठाउने जनशक्तिलाई सरकारले उपेक्षा गर्नु नै यसको प्रमुख कारण हो । भारत र चीन जस्ता धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुकहरूले विदेशमा काम गर्न गएका आफ्ना नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न योजना ल्याएर भविष्य सुरक्षित गर्नेतर्फ अग्रसरता देखाएका छन् । भारतले हालै मात्र रेमिट्यान्स पठाउने नागरिकलाई मुलुकमा भित्र्याएको पैसाको आधारमा बुढेसकालमा पेन्सन दिने व्यवस्थासमेतको व्यावस्था गरेको छ । नेपाल सरकारले गत आवको बजेटमै विदेशमा बस्ने नेपालीलाई सात करोड रुपियाँको ऋणपत्र जारी गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, त्यसमा पाँच लाखको मात्र आवेदन प्राप्त भयो । सरकारले अरू बेला बेवास्ता गरेकाले ऋणपत्र बिक्री नभएको श्रम जानकारहरूको बुझाइ छ ।
जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार व्यक्ति रेमिट्यान्स आम्दानी भने नौ हजार दुई सय ४५ रुपियाँ मात्र छ । यति थोरै रकम जोगाएर ऋणपत्रमा लगानी गर्नु त्यति सहज छैन । आर्जनको ७८.९ प्रतिशत दैनिक उपभोगमा, ऋण तिर्न ७.१ प्रतिशत, घर खरिदमा ४.५ प्रतिशत र शिक्षामा ३.५ प्रतिशत खर्च गरी २.४ प्रतिशत अर्थात् दुई सय २३ रुपियाँ मात्र बचत हुने गरेको छ । अर्कोतर्फ गरिबी र बेरोजगारीका कारण पिछडिएको क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको प्रभाव परेको छैन । नेपाल भित्रिने कुल रेमिट्यान्समध्ये सुदूरपश्चिमको हिस्सा दुई प्रतिशत मात्र छ । जहाँ गरिबी ४५ प्रतिशतभन्दा धेरै छ ।
रेमिट्यान्समार्फत शिक्षा क्षेत्रमा भएको लगानीले केही सम्भावना देखाएको छ । बाबु र आमाले विदेशबाट पैसा पठाएर राम्रो विद्यालयमा पढ्न पाएका छोरा र छोरी भविष्यमा अर्काको मुलुकमा श्रम गर्न जान इच्छुक हुँदैनन् त्यसैले उनीहरूलाई काम गर्ने उचित वातावरण बनाउन अहिलेदेखि नै आधार तयार गर्नुपर्छ । अहिले रेमिट्यान्स पठाइरहेको पुस्ता बूढो हुँदै जाने र नयाँ पुस्ताले पनि काम नपाउने अवस्था आएमा झनै समस्या निम्तिन सक्छ । त्यसैले व्यवस्थापन गर्न नजाने रेमिट्यान्स मन्द विष हुने विज्ञहरूको दाबी छ ।
रेमिट्यान्स पठाउने वर्गलाई केही रकम बचाउन प्रेरित गरेर भए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेमा भविष्यको पुस्ताले काम पाउने आधार बन्न सक्छ । रेमिट्यान्सबाटै भारतले केरलाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सेनेगलले अस्पताललगायत विश्वका विभिन्न मुलुकले आ–आफ्नो आवश्यकताअनुसार पूर्वाधारमा लगानी गरेका छन् । नेपालमा गोर्खा सैनिकहरूले पुलपुलेसा, बाटोघाटो बनाउनेबाहेक कामदारले पठाएको पैसाबाट कुनै संरचना बन्न सकेको छैन । नेपालमा त्यसबाहेक औँलामा गन्न सकिने गैरआवासीय नेपालीले पनि केही उद्योगधन्दामा लगानी गरेको भेटिएको छ ।
बैंकहरू पनि विभिन्न योजनानसहित रेमिट्यान्स भित्र्याउने प्रतिस्पर्धामा अगाडि छन् । कतिपय बैंकले विदेशमै कर्मचारी खटाएका छन् भने केहीले अन्य कम्पनीसँग मिलेर । विश्वभर रेमिट्यान्स पुर्‍याउने वेस्टर्न युनियन, सम्सारा तथा रेमिट्यान्स सेवाकै लागि मुलुकभित्र खुलेको आइएमई, प्रभुजस्ता कम्पनीसँग पनि नेपाली बैंकले सहकार्य गरेका छन ्।
प्रभु मनी ट्रान्सफरले मलेसिया र अमेरिकामा आफ्नै प्रतिनिधि राखेको छ । त्यसबाहेक अन्य देशमा विभिन्न कम्पनीसँग सहकार्य गरी मासिक एक लाखवटा कारोबार भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा समेत एजेन्टमार्फत सेवा दिइएकाले प्रभुमार्फत आउने रेमिट्यान्स १५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासहित प्रभुका मुलुकभर १५ सय एजेन्ट छन् ।
एभरेस्ट बैंकले आफ्नै एभरेस्ट रेमिटमार्फत कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन र मलेसियाबाट रेमिट्यान्स भित्र्याइरहेको छ । भारतको पन्जाब नेसनल बैंकसँगको सहकार्यमा इन्डो–नेपाल रेमिट सञ्चालनमा ल्याएको एभरस्टले तीन सय ६० एजेन्टमार्फत ५९ जिल्लामा रेमिट्यान्स सेवा दिँदै आएको छ ।
बैंक अफ काठमाडौंले भने रेमिट्यान्स भित्र्याउन विदेशस्थित आफ्ना प्रतिनिधि फिर्ता बोलाएर अन्य कम्पनीसँग सहकार्य गरेको छ । जनता बैंकले छिट्टै जनता रेमिट सुरु गर्न लागेको छ । अहिले भने बैंकले आइएमई, प्रभु, रिलाएबल, वेस्टर्न युनियन, सम्सारालगायतका कम्पनीसँग सहकार्य गर्दै आएको छ ।
सानिमा विकास बैंक पनि सानिमा रेमिट ल्याउने तयारीमा छ । हाल सानिमाले हिमाल, लक्ष्मी, प्रभु, वेस्टर्न युनियनलगायतका रेमिट्यान्स सेवा प्रदायकसँग मिलेर पैसा आदानप्रदान गर्दै आएको छ । किस्ट रेमिटका पाँच सय एजेन्टमार्फत ६४ जिल्लामा रेमिट्यान्स सेवा दिँदै आएको किस्ट बैंकले बहराइन, बेलायत, दुबईमा आफ्नै प्रतिनिधि राखेको छ । दुबईमा प्रतिनिधि राखेको मेगा बैंक मध्यपूर्वका अन्य मुलुकमा समेत पुग्ने तयारीमा छ । बैंकका ६२ जिल्लामा चार सय ५० एजेन्ट छन् । जापानबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन एक वर्षअघि खुलेको जेएमई मनी ट्रान्सफरले पैसा पठाएको केही मिनेटभित्रै नेपालमा भुक्तानी दिने र कोड नम्बर नमिल्नेजस्ता प्राविधिक कारणबाट ढिला हुन गएमा प्रापकलाई नियमित सम्पर्क गरेर ढिलोमा आजको भोलि रेमिट्यान्स उपलब्ध गराउने बताएको छ । अहिले जापानबाट भियतनाम र इन्डोनेसियामा पनि रेमिट्यान्स पठाइरहेको कम्पनीले आउँदो जनवरीपछि ८० मुलुकमा सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
« सेयर धितो कर्जा सवा अर्ब घट्यो प्रिमियममा डलर खरिद गर्दै मनी चेन्जर »